Momba anay - Baoding Jizhong Pharmaceutical Group
Amin'ny maha-subsidiary an'ny Jizhong Pharmaceutical Group, Hebei Teamtop Pharmaceutical Co., Ltd dia mirotsaka am-barotra amin'ny varotra ivelany sy ny varotra iraisam-pirenena amin'ny vokatra rehetra novokarin'ny vondrona.
Natsangana tamin'ny taona 1992, Jizhong Pharmaceutical Group dia nitarika ny fitsaboana amin'ny veterinera industry nandritra ny 27 taona mahery. Satria mpamatsy fanafody akoho lehibe indrindra sy mpanamboatra fanafody momba ny biby fiakarana ambony indrindra any Chine isika, orinasa avo lenta isika ary orinasa malaza eo amin'ny orinasa. Izahay dia mamoaka indrindra Albendazole Bolus, Albendazole Suspension, Enrofloxacin Injection, Oxytetracycline Injection, Ivermectin injection, GMP pharmaceutical & veterinary ary sns ...
Miaraka amin'ny toby famokarana voamarina 6 an'ny GMP, atrikasa 14 ary alika famokarana 26, dia namorona vokatra maro izay malaza manerana an'i Sina sy ny tsena any ivelany ny vondrona. Hatreto aloha dia nanangana fantsom-pamokarana midadasika sy haitao ary miasa miasa amin'ny mpivarotra tsy mivadika 4000, kolojika 60000, toeram-pambolena sy famonoana lehibe miisa 2500 ary mametraka ny fiaraha-miasa fiaraha-miasa amin'ny vondron'orinasa lehibe maro any Sina ary manondrana any Amerika Atsimo. Azia Atsimo Atsinanana, Afrika ary Moyen Orient.
2014, nekena ny tobim-pitsaboana sinoa momba ny fitsaboana ho an'ny biby sy teknolojia ara-teknolojia amin'ny faritany Hebei
Tamin'ny 2013, nanomboka nanangana ny Baoding Jizhong Biological Technology Co, Ltd.
2012, Hebei Teamtop Pharmaceutical Co., Ltd dia naorina ary nampidirina. Tianjin Haowei Biological Technology Co, Ltd dia nanomboka nanamboatra.
2011, ny Shijiazhuang Chemical Center dia natsangana ary nampidirina.
2009, Tianxiang Biological & Pharmaceutical Co, Ltd ary Sunlight Herb Co., Ltd dia nandalo fisafoana sy faneken'ny GMS ny Minisitry ny Fambolena.
2008, Beijing Jiucaotang Research Center no naorina.
2007, niorina ny Jizhong International Trading Department.
2006, atrikasa 5 sy tsipika famokarana 7 nifanaraka tamin'ny fenitry ny GMP mavitrika.
2003, Jizhong no orinasa voalohany tany Chine izay nandany GMP (statis).
1993, Jizhong Pharmaceutical Co., Ltd dia napetraka tamin'ny famokarana.
1992, Jizhong Pharmaceutical Co., Ltd dia voasoratra anarana ary nanomboka tamin'ny fananganana.
Hanohy hitarika ny indostria isika, hanolo-tena hikatsaka ny "fideran'ny olon-drehetra, hajaina amin'ny mpiara-miasa sy mpiasa", ary hanao ezaka ho lasa orinasa vondrona matihanina manana laza malaza, laza ary tsy fivadihana, hiarovana ny indostrian'ny famokarana maoderina.